Mooraan Dadaab Banaatti Tura: Ajaja Mana Murtii Ol Aanaa Keeniyaa
Guraandhalaa 09, 2017
Mooraan baqattootaa guddichi addunyaa banaatti kan turu ta’uu kan mootummaa Keeniyaaf mooraan sun cufuun loogii dha jechuu dhaan lammiin biyyattii abbaan murtii mana murtii ol aanaa Keeniyaa John Mativo beeksisaniiru.
Mativon akka jedhanitti mootummaan addaan baasee baqattoota Somaaliyaa irratti fuuleffachuun dararaa jamaa irratti raawwatu, kan seeraan alaa fi loogii ti, kanaaf faallaa heera biyyaa ti jedhan. kanaaf jecha kan cufame ministeerri dhimmootii baqattootqaa bakkatti deebi’uu akka qabu illee labsanii jiran.
Gurbaan ganna 24, Mohaammad Abdullaahi Jumaalee warra cufiitii kaambii tanaa rakkisftu keessaa tokko.
“Dhugumaanuu oduun haga oduu tana na gammachiifte hin jirtu.Maan jennaan namii akka kiyyaa ka kaambi tana keessatti dhalatee guddate ...ka Somaalee fi waan isiituu tokkollee keessaa hin beenne oduu tana guddoo jaalanne.”
Caamsaa bara 2016 keessa ture mootummaan mooraa Dadaab kan baqattoota Somaaliyaa kuma 258 baatii Sadaasaa keessa akka cufu kan labse. Ajaji sunis hanga baatilee itti dabalaa ja’aaf akka turu taasisame.
Sababaa ijoon naga eegumsa ta’uu isaaf mooraan sun bakka gargaarsaa ta’uun hafee bakka shorokeessonni akka al Shabab keessa dadhatan achi irraas Keeniyaa haleeluuf karoorfatan ta’e jedha himannaan dhiyaate.
Dubbi himaan UNHCR Yvonne Ndega akka jedhanitti Keeniyaan yeroo mara bakka dahataa uummati keessa dahatauuf gargaarsa keessatti argatu jedhan.
Kaambiin baqaa Dhadhaab hin cufamtu
Somaaliyaan Filannoo Demokiraatawaa Dha Jedhame Geggeessite
Siiriyaan Uummata Kumaan lakkaa’amu Galaafatte: Amnestii Internaashinaal
Traamp Putiniin Deggeruun Nu Yaaddesse: Gareelee Mirga Namaa fi Seera Tumtoota US
Haleellaan Of Wareegaa Lubbuu Galaafate Mana Murtii Kabul Cinatti Raawwate
Paartiin Itiyoophiyaa Bulchaa Jiruu fi Paartilee Mormituun 21 Giddutti Marii Gaggeessuuf Qophitti Jiru
Ajaja Prezidaant Traamp Kennanii fi Falmii Seeraa Isa Mudate
Abbaan Gadaa Booranaa Guyyoo Gobbaa dhiyoottuu Abbaa Gadaa 72essoo Kuraa Jaarsootti Baallii Kenna
Baqattoonni Mooraalee Baqattootaa Keeniyaa Keessaa Gara Yunaayitid Isteets Deemuuf Ehama Argatan Uggura Imalaa Prezidaant Traamp Jalatti Maal Akka Tahan Beekuu Dhabuun Dhiphataa Jiran
Somaaleen pirezidaantii haaraa filattee, filannoolleen nagumaan dhumatte
Itiyoophiyaan Ragaa Badii Dalagamee Naaf Haa Dhiyeessitu: Muummicha Barreessaa Tokkummaa Mootummootaa
Antonii Bliinkan Gara Ekuwaadoor fi Kolombiyaatti Imalanii Jiru
Itiyoophiyaa Keessatti Lakkobsii Namoota KOOVIID-19n Du’anii Dabalaa Jira:I nistitiyuutii Fayyaa Hawaasaa
Magaalaan Maqalee yeroo Sadaffaaf Haleelamtee Jirti
Haleellaa Humna Qilleensaa Maqalee irratti Raawwatame jedhame
Jijjiramnii Qilleensaa Ilaalcha Hatattamaa Argachuu Qaba: Kamaalaa Haariis